पल शाहको बि’हेमा, बेहुली जग्गेमै बेहो,श भ’एपछि (हेर्नुस अभिनित भिडियो ) – Ap Nepal
नायक तथा मोडल पल शाह र गरिमा शर्मा फिचर्ड ‘पर्दैन पर्दैन’ गीतको भिडियो युटुव ट्रेन्डिङमा उक्लिदो क्रममा छ । पल शाह र गरिमा शर्मा रियल लाइफ मा नभइ रिल लाइफ ‘पर्दैन पर्दैन’ गीतको भिडियोमा दुलहि बनेकी हुन ।
यो गित अत्यन्तै दर्शक स्रोताहरुको रोजाइमा परेको छ। निशा पौडेल र सुरेश लामाले गाएको गीतको भिडियोलाई झन्डै ६ लाख ८० हजारले हेरिसकेका छन् । दिपक शर्माको संगीत रहेको उक्त गीतमा सरोज ओली शब्द रचना गरेका छन्।
भिडियोलै ३१ हजार बढीले लाईक पनि गरेका छन् । पल शाह अहिले एकदमै चर्चित नाम हो । उन्ले खेलेको धेरि म्युजिक भिडियोहरु हिट छन ।
Prevपिल्स: कस्ता म’हिला हरुले प्रयोग गर्न सक्छ’न् ? कहिले खाने र कसरी गर्भ रहन दिं,दैन ?
Nextपराई घर जानुको पिडा: अन्माएर गाडीमा चढीसकेकी बेहुली माइतीलाई अंगालो यसरी रोइन (भिडियो भाइरल)
अलिफ खान दोहोरी गाउँन पुग्दा टिका हाँसेर मुर्छा परिन ,लोक गायिका टिका पुनले खोलिन लाखौ लगानीमा दोहोरी (भिडियो सहित)